Fiteny any India - Wikipedia
Ny fiteny any India dia maro dia maro sady ao amin' ny fianakaviam-piteny maro samihafa. Ny fanisana natao tamin' ny taona 2011 dia nahitana fiteny miisa 270, ka ny 122 dia fiteny lehibe (be mpampiasa). Ny lalàm-panorenana indiana dia manao ny 22 amin' ireo fiteny ireo ho fiteny ôfisialy. Ny 77 %n' ny vahoaka indiana dia miteny fiteny indô-ariana (ka ny be mpiteny indrindra dia ny fiteny hindy izay fiteny nibeazan' ny olona miisa 422 tapitrisa, izany hoe 41 %n' ny mponina), ny 20 %n' ny mponina no miteny amin' ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny dravidiana. Ny fianakaviam-piteny hafa hita ao India dia ny fiteny aostrôaziatika, ny fiteny sinô-tibetana, ny fiteny tai-kaday, ary fiteny manirery vitsivitsy. Ny fiteny anglisy, izay fitenin' ny mpanjana-tany britanika, dia fiteny voalohany na faharoa safidin' ny 12 %n' ny mponina. Ny fiteny ôfisialin' ny governemanta iraisana dia ny fiteny hindy. Araka ny lalàm-panorenana dia miato tsy ho fiteny ôfisialy faharoa ny fiteny anglisy dimy ambin' ny folo taona aorian' ny fahaleovan-tena, nefa noho ny fanoheran' ireo fanjakana indiana tsy miteny hindy dia nandany lalàna tamin' ny taona 1963 ny Antenimiera izay nihazona ny sata maha fiteny ôfisialy faharoa io fiteny io. Miisa 22 ireo fiteny voatanisa ao amin' ny Tovana fahavalo ao amin' ny lalàm-panorenana. Misy fiteny dimy ambin' ny folo hafa koa izay manana sata ôfisialy amin' ny fanjakana na tany sasany ao India.
Sarintany maneho ireo faritra itenenana indrindra ny fiteny any India
1.1 Fiteny indô-ariana be mpiteny indrindra
1.1.1 Fiteny hindy sy fiteny ordo
1.1.2 Fiteny bengaly
1.1.3 Fiteny maraty
1.2 Fiteny indô-ariana hafa
2 Ireo fiteny dravidiana
2.1 Fiteny dravidiana be mpiteny indrindra
2.1.1 Fiteny telogo
2.1.2 Fiteny tamily
2.2 Fiteny dravidiana hafa
3 Ireo fianakaviam-piteny sy vondrom-piteny hafa
3.1 Fiteny aostrôaziatika
3.2 Fiteny sinô-tibetana
3.3 Fiteny tai-kaday
3.4 Fiteny andamaney
Ireo fiteny indô-arianaHanova
Fiteny indô-ariana be mpiteny indrindraHanova
Fiteny hindy sy fiteny ordoHanova
Ny fiteny hindi-ordo na koa fiteny hindostany dia fiteny ifandraisana amin’ ny daholobe tao avaratr’ i India (sy any Pakistàna). Io fiteny io dia fiteny manana endrika ôfisialy roa, ny fiteny hindy sy ny fiteny ordo.
Ny fiteny hindỳ dia tenim-pirenen' i India. Ny isan' ny olona miteny azy dia misy 480 tapitrisa eo ho eo, 360 tapitrisa amin' ireo no manana ny fiteny hindỳ ho tenin-dreny. Any avaratr' i India no misy ny ankabeazan' ny mpiteny hindỳ. Soratana amin' ny alalan' ny abogida devanagary ny fiteny hindy.
Ny fiteny ordò dia tsy fiteny any India fotsiny fa any Pakistana koa, mitovitovy amin' ny fiteny hindy izy fa soratana amin'ny abidy arabo. Misy olona 160 tapitrisa miteny ordò eto an-tany. Betsaka ny teny indramin' ny fiteny ordò amin' ny fiteny persana sy fiteny arabo. Ny fiteny ordò no fiteny fahatelo ambin' ny folo na iraika ambin' ny folo lehibe indrindra eto an-tany.
Ny fiteny bengaly dia fiteny tenenina indrindra any India atsinanana, nefa tetenina koa any Bangladesy, anisan' ny teny ôfisialin' i India, indrindra any amin'ny faritan' ny Bengaly Andrefana sy any Tripura. Araka ny fanontan' ny World Almanac 1999, ny teny bengaly no tenin-drenin' ny olona miisa 207 tapitrisa. Teny indô-eorôpeana any atsinanana indrindra ny fiteny bengaly, manampy ny fiteny asamey.
Ny fiteny maraty dia fiteny tenenin' ny olona miisa 75 tapitrisa any ho any India, indrindra ao amin' ny fanjakan' i Maharashtra sy Goa. Ny fiteny maraty dia iray amin' ireo fiteny ôfisialy any India.
Fiteny indô-ariana hafaHanova
Ireo fiteny dravidianaHanova
Ny fiteny dravidiana dia fianakaviam-piteny ahiatana fiteny miisa 30 any ho any izay samy avy ao India avokoa, ka tenenina indrindra ao atsimon' i India. Misy mpiteny azy ireo koa ny any Srilanka, ny any Pakistàna sy ireo vahoaka indiana nifindra monina. Ny tena be mpampiasa dia ny fiteny telogo, ny fiteny tamily, ny fiteny malaialama ary ny fiteny kanada.
Fiteny dravidiana be mpiteny indrindraHanova
Ny fiteny telogo dia fiten' ny olona miisa 70 tapitrisa any ho any, tenenina indrindra any amin' ny faritra Andhra Pradesh, izay manao azy ho fiteny ôfisialy io. Fiteny ôfisialy ihany koa izy any amin' ny faritra Karnataka sy Maharashtra ary any Odissa (na Orissa).
Ny fiteny tamily dia fiteny ôfisialin' i Tamil Nadu sy ny tananan' i Pondichery ary Karîkâl. Fiteny ôfisialy koa io fiteny io any Singaporo. Miisa 74 tapitrisa mahery ny mpiteny tamily maneran-tany, araka ny voalazan' ny World Almanac 1994.
Fiteny dravidiana hafaHanova
Anisan' ny fiteny dravidiana be mpiteny koa ny fiteny kanada sy ny fiteny malaialama. Ny fiteny kanada dia fiteny any atsimon' i India, izay no fiteny tena antitra indrindra amin' ny fiteny diravidiana, fiteny ôfisialin' i Karnataka, ampiasain' ny olona miisa 45 tapitrisa any ho any. Ny fiteny malaialama dia anisan' ny fiteny tenenina any amin' ny tapany atsimon' i India, fiteny ôfisialin' ny faritany mizakatenan' i Kerala, fiteny ôfisialy ao amin' ny faritan' i Lakshadweep sy any Pondicherry, fiteny ôfisialin' i India ihany koa, izay misy mpiteny miisa 35,9 tapitrisa any ho any.
Ireo fianakaviam-piteny sy vondrom-piteny hafaHanova
Ny fiteny aostrôaziatika dia fianakaviam-piteny any Azia Atsimo-Atsinanana sy ao amin' ny faritra atsina any India. Heverina ho fitenin'ny tompon-tany ao Azia Atsimo Atsinanana sy any atsinana any India ireo fiteny ireo. Miisa 10 tapitrisa ny mpiteny aostrôaziatika any India, 6 tapitrisa ny mpiteny sinô-tibetàna, izany hoe 3 %n' ny mponina. Anisan' ny fiteny aostrôneziana ny fiteny kasy (khasi) sy ny fiteny monda (munda) ary ny fiteny santaly (santali). Anisan' ireo fiteny ao amin' ireo nosy Nicobar. Ankoatry ny fiteny kasy sy ny fiteny santaly dia fiteny tandindomin-doza ny fiteny aostrôaziatika ao India.
Ny fiteny sinô-tibetana dia fianakaviam-piteny any Azia Atsinanana sy Azia Atsimo Atsinanana sy Azia Afovoany ary Azia Atsimo.
Ny fiteny tai-kaday dia fianakaviam-piteny izay nantsoina hoe fiteny daîka tany aloha, izay ahitana fiteny miisa zato any ho any tenenina ao amin' ny saikanosin' i Indôsina sy any amin' ny faritra atsimo ao Sina.
Ny fiteny any Andamàna dia vondrom-piteny ao amin' ny nosy Andamàna ao atsimo atsinanan' i India, atsinanan' i Srilanka, andrefan' i Mianmara, tenenin' ny tompon-tany andamaney. Misy vondrona roa ao amin' izany fianakaviam-piteny izany, dia ny fiteny andamaney lehibe sy ny fiteny andamaney avaratra (atao hoe fiteny ônge-jaraoà, mba tsy hisian' ny fampifangaroana azy amin' ny sampan' ny fiteny andamaney lehibe any avaratra).
Fiteny any Pakistana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_any_India&oldid=1045170"
Dernière modification le 15 Mey 2022, à 13:13
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 13:13 ity pejy ity.